वुहानका नेपाली जहाज होइन, ‘सरकार’ कुरिरहेका छन्। सम्माननीय प्रमज्यू, अब ढिलाइ नगरौँ। तिनको जीवन र परिवारको मानसिक पीडाप्रति गम्भीर बनौँ। चीनले झैँ हामी दुई दिनमा अस्पताल बनाउन नसकौँला, तर अस्थायी शिविर बनाउन किन ढिलाइ ? युद्धस्तरमा प्रबन्ध गरौँ, तत्काल उद्धार गरौँ।
बनिसकेका अपार्टमेन्टहरूलाई नै प्रयोग गर्न सकिन्छ कि ?
नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नेपाली बजारमा ‘एयर फिल्टर मास्क’को माग अत्यधिक बढेको छ। तर, सबैभन्दा सुरक्षित ‘एन–१५ मास्क’ चिनियाँ नागरिकले नै किनेर आफ्नो देश लगेपछि नेपालमा अभाव भएको छ।
हिजो टिचिङ अगाडिको पसलमा सोध्दा पसले मित्रले ‘अलिक बढी पैसा दियो, अनि उताबाट आएको मास्क उतै पठाएँ’ भन्ने निर्धक्क जवाफ दिए। नाफाका अगाडि ‘व्यावसायिक मर्यादा’को के महत्त्व ! हामी आफ्नै घरको मूल्य तोकेर बसेका दलाल न हौँ।
गोर्कीको ‘मदर’, ओस्त्रोभ्स्कीको ‘अग्निदीक्षा’, चेको डायरी, माओको ‘रेड बुक’, हो ची मिन्हको ‘प्रिजन डायरी’, लेनिनको ‘स्टेट एन्ड रेभोल्युसन’ सबै मेरो दिमागमा छन्। ओली सर र मिस्टर पीकेले मलाई पक्रिने खतरा पो छ कि, मान्यवर !
हुँदा–हुँदा पढ्ने विषय पनि सरकारले निर्धारण गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु भनेको बाँकी कुरा केही नरहनु भन्ने हो। देश दुर्घटनाको घडीमा छ। यो सबै राजनीति इमानदार र योग्य मान्छेको हातमा नहुनुको परिणाम हो। सायद फेरि लड्ने समय आएको छ।
बालुवाटारमा पाँच सय जतिलाई रात्रिभोजको आयोजना भएछ। बालुवाटार जनताले प्रमका लागि बनाएको हो कि अमुक दलका लागि ? भोजको लाखौँ रुपियाँ कस्को ? जनताको कि कसैको निजी ?
बालुवाटार कम्युनिस्टहरूको भोजभतेर र दारुपानी गर्ने अखडा होइन। भोजभतेर गर्ने भए कम्युनिस्टहरूको यती समूहले चलाएको गोकर्ण रिसोर्टतिर गए हुन्छ। बालुवाटार देश चलाउने अड्डा हो, नकि पार्टी गर्ने अखडा !